Newsenepal:: स्विजरल्यान्ड र सिङ्गापुर बनाउछु भन्नेले देशमा एउटा गतिलो अस्पताल बनाइदिएको भए आज काधमा श्रीमती बोकेर छोरीज्वाइ सहित हवाइजहाजमा अमेरिका कुद्न पर्ने थिएन
स्विजरल्यान्ड र सिङ्गापुर बनाउछु भन्नेले देशमा एउटा गतिलो अस्पताल बनाइदिएको भए आज काधमा श्रीमती बोकेर छोरीज्वाइ सहित हवाइजहाजमा अमेरिका कुद्न पर्ने थिएन
६२/६३ सालको जनआन्दोलनमा नेपाललाइ सिङ्गापुर र स्विजरल्यान्ड जस्तै बनाउने अबको १० बर्समा भनेर रातारात चम्किएका प्रचन्डले तेहि भासणबाट नेकपा माओवादिलाइ देशकै ठूलो पार्टी बनाउन त सफल हुनुभएकै थियो तर त्यो नारा केबल जनताको भोट लुट्न लगाइएको थियो । आज ओलि सरकारले बृद्धभत्ताको झुटो नाराले भोट लुटेर जसरि सत्ता कब्जा गरेर बसेको छ तेसरी बर्सौ जनता झुक्काएर प्रचन्ड आफ्नो एस आरामिको जीवन बाचे । ।
आज जनयुद्दको घाउ उतिकै आला छन, जनता त्यै पिडामा बसेका छन तर प्रचन्ड आफ्नो स्वास्थ्य जाँच गर्न चाइना र थाइल्यान्ड अनि श्रीमतिको स्वास्थ उपचार गर्न अमेरिका, सिङ्गापुर जस्ता देश धाउछन। । झुप्रो बाट उठेको नेताको यो बेहोरा कतिको जाएज अनि नाजाएज त्यो जनताले नै पत्तो पाइसकेका छन। ।
देशलाइ स्विजरल्यान्ड र सिङ्गापुर बनाउछु भन्नेले एउटा गतिलो अस्पतालमात्र बनाउन सकेको भए आज श्रीमतिलाइ काधमा बोकेर उपचारको नाममा छोरी ज्वाइलाइ लिएर अमेरिका जानू पक्कै पर्दैनथियो। । बिकास भनेको सोचले हुन्छ गफले हुदैन। धिक्कार छ कम्रेड ज्युको जिन्दगी।
१७ हजार मानिस मारेर कारवाही भोग्न नपर्ने ??? १५० वटा पुल बिस्फोट गराएर कारवाही भोग्न नपर्ने ??? १३ हजार मन्दिर भत्काएर कारवाही भोग्नु नपर्ने ? गरिबलाई धनी बनाउँछु भनेर आँफै मात्र धनी हुँदा कारवाही भोग्नु नपर्ने ??? बिचौलिया र गुण्डा पालेर जनताका धन लुट्नेले कारवाही भोग्नु नपर्ने ??? मुलुक परिवर्तन गर्ने भनेर देश तहसनहस बनाउँदा कारवाही भोग्नु नपर्ने ??? अब दाहाल कसरी कारवाहीको भागीदार बन्छन् र उनलाई अन्तराष्ट्रिय आदालतमा उभ्याएर कसरी कारवाही गर्ने यो सबै मैले केहि दिन अघि यो आलेखमा लेखेको छु । सबैले शेयर गरेर युद्ध अपराधीहरुलाई कारवाही गर्न कम्मर कसेर लागौं ।
युद्धले बिश्व तहसनहस भएपछि १९४६ मा राष्ट्रसंघको एक अभिन्न अंगका रुपमा अन्तराष्ट्रिय अदालत स्थापना गरियो । युएन स्थापनाको एक बर्षपछि यो अंग सुुरु गरिएको हो । संयुक्त राष्ट्रसंघले न्यायका लागि अन्तराष्ट्रिय अदालत नेदरल्याण्डको हेग (ज्बनगभ) शहरमा राखियो ।
यो अहिलेसम्मकै ठुलो कम्युनिष्ट क्रुरताको रुपमा राष्ट्रसंघले लिएको छ । हेगले यो नरसंहारलाई हत्याको रुपमा मात्र हेरेको छैन, शिक्षा स्वास्थ्य, गास, बास, कपास आदिलाई कम्युनिष्ट सरकारले जनताप्रति गद्धार गरेको रुपमा लिएको छ । जनतालाई पहिला युद्धमा लगाउने, नमान्नेको परिवारलाई हत्या गर्ने र युद्ध जितिसकेपछि असहमत राख्ने कार्यकर्तालाई धमाधम हत्या गर्ने कम्बोडिया कम्युनिष्टले ग¥यो ।
हेगको यो कारवाहीले पोलपोटको ४० बर्षको कठोर कम्युनिष्ट शासनलाई समाप्त पारिदिएको थियो । यो कम्युनिष्टको शासनभर २ लाखको हत्या, देशको आधा जनसंख्या बिस्थापित, ब्यापक रोगब्याधी, भोकमरीले कम्बोडिया चिहान जस्तै बन्न पुगेको थियो ।
त्यस्तै, हेगले अर्को ठुलो अपराधमा युगाण्डाका बिद्रोही नेता जोसेफ कोनी बिरुद्ध २००५ मा मुद्धा चलायो ।
अहिले बिश्वमा जम्मा ४ देशमा कम्युनिष्ट शासन छ । उत्तर कोरिया, क्युवा, भियतनाम र चीन । आधा दर्जन देशहरुमा प्रजातान्त्रिक शक्तिमा रुपान्तरित कम्युनिष्टहरुको शासन चल्छ । भेनेजुएला पनि यस्तै अर्ध कम्युनिष्ट मुलुक हो । नेपालमा कम्युनिष्ट दलको सरकार भएपनि बिश्वले अझै यसलाई कम्युनिष्ट मुलुक भनेर चिन्दैन । बि.सं. २०३० सालतिर बिश्वका आधा मुलुकहरुमा कम्युनिष्ट शासन थियो । जति कम्युनिष्ट शासनको जडतामा जकडिए, ति देश गृहयुद्धमा फसिरहे । जस्तै दक्षिण अमेरिकी मुुलुक पेरु । पेरुलाई सधैं कम्युनिष्ट आन्दोलनले डिस्टर्व ग¥यो ।
अब लागौं, पुष्पकमल दाहालको हेग यात्रा कसरी शुरु हुन्छ ? पहिलो कुरा उनी स्वंयले युद्धका बिषय उचालेनन् र जनतासँग प्रायश्चित गर्दै गए भने हेग यात्रा रोकिन सक्छ । बिश्वका केही युद्धग्रस्त मुलुकका युद्ध अपराधिहरुले यस्तै छुट पाएका उदाहरण छन् । तर, दाहालले हिजोआज माओबादी सकिएको छैन भन्दै युद्धका कुरा निकाल्न थाले भने निश्चित रुपमा उनको हेग कठघरा यात्रा टाढा हुने छैन ।
नेपालमा माओबादीले ०५२ फागुन १ देखि युद्धको सुरुवात गरेर अपराधको चरण शुरु गरेको हो । यो ०६३ मंसिरमा राष्ट्रसंघकै तत्कालिन एक मिसन टोली (अनमिन) को रोहवरमा अन्त्य भयो । युएनले माओबादीको युद्ध अवधिभरकै रेकर्ड सुरक्षित राखेको छ । बरु नेपालसँग यी प्रमाणहरु छैनन् । तर, युएनका फाइलहरुमा माओबादी युद्धका बेलाका घटनाका एक÷एक फाइल सुरक्षित छन् । युएनले शान्ति कायम गर्ने काम मात्र गर्दैन, सधैंलाई युद्ध समाप्त गर्ने मिसन पनि शुरु गर्छ ।
बार्ताका बिषय पुष्पकमल समक्ष तत्काल पुग्थ्यो । उनले बार्तामा खटिएकालाई बार्ता छोडेर आउनु भन्थे । भोलिपल्ट कही न कही भीषण आक्रमण गरिहाल्थे । पुष्पकमलले चलाएको यो युद्धले धेरै निर्दोषहरु मारिए । बाबुराम, मोहन बैद्य लगायतकाहरु सकभर काटमार नगरौं भन्थे ।
१. तत्कालीन माओबादी युद्ध पुष्पकमलको कमाण्डमा सुुरु भएको हो । यो युद्धमा आधा भन्दा बढी बालबालिका संलग्न थिए । जसमा उनि युद्ध अपराधी ठहरिन सक्छन् ।
३. युएनले मान्छे मारेको अपराध मात्र हर्र्दैन । मानिसका मौलिक हक अधिकारहरु खोसिएको सन्दर्भमा उति नै अध्ययन गर्छ । पुष्पकमलको युद्धमा सबैभन्दा बढी मारमा गरिब जनता परे । युबाहरु बेरोजगार भए । बिदेशिन बाध्य भए । देश भित्रका उद्योगहरु बन्द भए । स्कुल बन्द गरिए । जनताका आधारभुत आवस्यकता यही युद्धमा अबरुद्ध भए । यी सबैका दोषी पुष्पकमल भएको बिभिन्न रेकर्डमा सुरक्षित छ ।
धेरै युद्धका दोषीहरु सच्चिएर प्रायश्चित गरेर र आफैलाई बदलेर अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको कठघराको कारवाहीबाट बंच्दै आएका छन् । जो युद्धलाई निरन्तरता दिन खोजे उनिहरु मात्र हेगको कारवाहीमा परे । अब सनक्क सन्किएर हेगको यात्रा गर्ने कि प्रजातान्त्रिक बिधिलाई स्वीकार गरेर चुपचाप बस्ने, यो स्वंय पुष्पकमलकै हातमा मात्र छ ।
186003/19/2019 @ 10:59
पछिल्लो २४ घण्टामा देशभर १ हजार १ सय ५४ जनामा कोभिड १९ संक्रमण पुष्टि र हाल सम्म डिस्चार्ज भएर जानेको संख्या ४७ हजार २ सय ३८ जना